Zaw Aung (Mon Ywa) – ဆင်ခရွန်ကကိုလတ်နဲ့ ၂၀၁၂ စင်ကာပူ၊ မြန်မာအခြေအနေ | MoeMaKa Burmese News & Media
မကြာခင်မှာပဲ ကိုလတ်အလုပ်လုပ်တာ သူဌေးကသဘောကျလာတယ်။ မြန်မာပြည်ကထွက်လာသူ ဗမာများကလည်း ဗမာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကို လိုက်ရှာပြီး လည်တဲ့လူက တိုက်ရိုက် ကုမဏ္ဍီကို ဖုန်းဆက်၊ အလုပ်လျှောက်လွှာပို့ လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဌေးက ကိုလတ်ကို Recommend လုပ်ခိုင်တယ်။ ကိုလတ်ကလည်း အဲဒီ အလုပ်လာလျှောက်တဲ့ ဗမာတွေကို တကယ့်ဘွဲ့ရ အင်ဂျင်နီယာဟုတ်တယ် .. သိတာကြောင့် သူဌေးကို အလုပ်ခန့်ဘို့ ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလူတွေကိုလည်း သူ့ရှေ့က အစ်ကိုကြီးလုပ်သွားသလို .. အီးပီ(Employment Pass) ကျရင် တစ်လစာပွဲခပေးရမယ်နော် .. သူဌေးကိုပေးရသလို၊ စာရေးမကို ပေးရသလို၊ အပြင်က ပွဲစားတစ်ဦး စာရွက်စာတမ်းလုပ်ပေးသူကို ပေးရသလို … အလုပ်သိပ်လိုချင်နေတဲ့ လူငယ်အင်ဂျင်နီယာလေးကလည်း အခုချက်ချင်းပေးစရာမလိုဘူး ..ပထမလခထုတ်မှ ပေးရမယ်ဆိုတော့ … ပေးမယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ ဗမာလေးတွေ ၃ယောက်လောက် အလုပ်ခန့်လိုက်ပါတယ်။
အီးပီကလည်း ကုမ္ပဏီသိပ်မကောင်းရင် Reject ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဖောင်ဖြည့်ကတည်းက ကိုယ့်ဘွဲ့၊ အလုပ်အကိုင်စာရင်းတွေမှာ ကို့ရိုကားယားဖြစ်သွားရင်၊ ဥပမာ ဘွဲ့ရတဲ့ခုနှစ်ထက် အလုပ်စလုပ်တဲ့ခုနှစ်ကစောနေရင် Reject ဖြစ်သွားတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ နိုင်ငံခြားသား သိပ်များနေရင်လည်း Reject ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုလတ်သူဌေးကတော့ တနာရီ ၉ ဒေါ်လာနဲ့ ဈေးချိုချိုဗမာများကိုအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ ဗမာ အင် ဂျင်နီယာပေါက်စ ကိုလတ်လည်း ရှိပြီးသားဆိုတော့ ကိုလတ်ထောက်ခံရင် အီးပီတင်ပေးလိုက်တယ်။ အီးပီမကျသူတွေပဲ များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်အသစ်မရှာခင် ဗမာပြည်ကငွေထပ်မှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အီးပီကျသွားရင်တော့ ကိုလတ်က တစ်လစာ ပွဲစားခရမယ်လေ။ တကယ်လည်း အီးပီကျလာတဲ့အချိန် ကိုလတ်ရဲ့နှလုံးသားက ပထမအစ်ကိုကြီးလောက် မခက်ထန်ပါဘူး။ လူကသာ မာကြော၊ပြတ်သား၊ အလုပ်လုပ်တတ်၊ ခိုင်းတတ်ပေမဲ့ နှလုံးသားကနူးညံ့တော့ သူတို့ချွေးနဲစာ တစ်လစာကိုယူရမှာ စိတ်မသန့်ဘူး။ အရေးထဲ အီးပီကျသွား သူတွေက ကိုဘိုလတ်ရယ် ခဏဆိုင်းပါဦး။ နောက်လပေးပါမယ် … ဘာညာနဲ့လုပ်တော့ ကိုလတ်က စိတ်ပျက်လာပြီး ပေးမနေပါနဲ့တော့ကွာ ဆိုပြီးပွဲခမယူတော့ဘူး။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကိုလတ် ဘယ်တော့မှပွဲခယူတဲ့အလုပ် မလုပ်တော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်၊ တည့်တည့် ပြောတတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ ပွဲစားလုပ်စားလို့ မရဘူးဆိုတာ ခပ်စောစောပဲ သဘောပေါက်သွားခဲပါတယ်။
မြန်မာကျပ်ငွေနှင့်စင်ကာပူတစ်ဒေါ်လာ 1991 – 2011 ဇယား
မြန်မာပြည်ပြန်ချင်တဲ့ မြန်မာလူငယ်တဦးက သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဘော့စ်ကိုမေးတယ်။ Can our company to go Myanmar? ဆိုတော့ မြန်မာတွေ ကိုနားလည်တဲ့ဘော့စ်ဖြစ်လို့ Boss answered with smile, “of course. When we go Myanmar to extend business – you have to go with me” .. မြန်မာပြည်မှာ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေချဲ့ရင်၊…. ဘော့စ်က ပြုံးပြီး၊ ခင်ဗျားတို့ကိုပဲ ခေါ်သွားရမှာပဲလို့ပြောတယ်။